Home Wararka DSF oo faah faahin ka bixisay Qaaraanka lagu leeyahay ee QM
Xilli dhawaan Qaraamada Midoobay ay shaacisay in dalal ay kamid ah Soomaaliya bixin qaraanka QM ayaa waxaa Waekaasi faah faahin ka bixisay dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Danjiraha u fadhiya Soomaaliya Qaramada Midoobay Abuukar Balle ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya laga soo bilaabo sanaskii 1989-kii ilaa 2017-kii aysan bixin Qaaraanka Xubinnimada Qaramada Midoobay, balse Soomaaliya ay intaasi u furneyd inay Xibin ka noqoto Qaraamada Midoobay maadaama duruufo badan iyo dagaalo sokeeye ay ka dhaceen dalka.
Danjiraha oo la hadlay Tv-ga Universal waxaa uu sheegay in laga soo bilaabo sanadkii 2018-kii ilaa 2021 dowladda Soomaaliya ay bixineysay lacagihii leyska rabay sanad walbka oo dhan qiyaastii 37,000 ama 35,000 oo Dollar.
Waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in dowladda Soomaaliya labadii sano ee la soo dhaafay ay wadahadal kula jirta Guddiga u qaabilsan qaaraamaadka dowladaha bixiyaan sidii Soomalaiya u heli laheyd in muddo qabsato si lacagaha lagu leeyahay loo biixyo.
Maalmihii la soo dhaafay ayaa aad loo hadal haayay lacagaha qaaraanka ah oo qaraamada Midoobay ku leedahay dowladda Soomaaliya, xilli dhawaan Madaxweynaha mudso xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kasoo muuqatay fagaarayaasha Caalamiga ah, doorweyna ku leedahay howlaha Qaramada Midoobay.
Previous articleXukuumadda oo wada qorshe dalka looga ceyrinayo Francisco Madeira iyo Sababta keentay
Next articleAfhayeenka xukuumada xilgaarsiinta oo qarax lala beegsaday iyo khasaare ka dhashay
Madaxweyne Muuse biixi oo magacaabay xilala kala duwan
Duqeeyn culus oo ka dhacday gobolka Hiiraan!